Mushonga wakanyanya we COVID mupasi rose unowanikwa mahara kuUS nekune dzimwe nyika vashanyi muHawaii
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Mushonga wakanyanya we COVID mupasi rose unowanikwa mahara kuUS nekune dzimwe nyika vashanyi muHawaii
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Yakareba Zvinodhaka Shopping Discount
Vashanyi muHawaii vanobhadhara $ 15.00 + mutero uye matipi eMai Tai. Mushonga we COVID, zvisinei, ndeye mahara uye hapana matipi anogamuchirwa.
Vashanyi vanowana jekiseni muHawaii vari kuwana mamwe madhora ekutenga uye mapiro pamwe nemushonga wekudzivirira.
Zvese izvi zvine mutsindo neHurumende yeHawaii neHawaii vateresi. Iyo inotsausa COVID nhamba yekudzivirira manhamba.
Kuisa veruzhinji vakasununguka nenhamba dzenhema kunogona zvirokwazvo kuita kuti vanzwe kusachengeteka kwekuchengeteka uye kuwedzera kwehutachiona nekufa.
Hawaii senge nyika zhinji dzeUS hadzigone kugonesa vagari vayo vese kuti vabaiwe jekiseni re COVID-19. Iye zvino ivo chinyararire vanopa majekiseni kune vashanyi, uye pane chikonzero chakasviba.
Vateresi veHawaii vanokoka vakapfuma vashanyi vepasi rese kuti vatore mushonga wekubatsira we COVID-19.
Gavhuna weHawaii Ige ane yanga ichikurudzira vashanyi kuti vagare pamba. Sei asina kutaura nezvevashanyi vashanyi vekushanya?
Mwedzi mishoma yapfuura, Hawaii yakanyora 20-30 hutachiona hutsva pazuva. Ikozvino nevashanyi vakafashukira nyika, padhuze nezviuru zviitiko zvitsva zvehutachiona hweCOVID-1,000 uye kufa rekodhi kuri kuita kushanya kwekushomeka.
Zvitoro, mahotera nemaresitorendi zvakazara. Zvinonakidza zvinotora mari yekupinda katatu mune dzimwe nguva uye vakabatikana. Iko hakuna nzvimbo yekuisa pasi tauro paWaikiki pamhenderekedzo, asi kukiya kutsva kuri kuramba kuchiwedzera kuitika, zvisinei, kwete maererano naLt.Gov. Josh Green.
Gavhuna Ige nguva pfupi yadarika akakumbira vashanyi kuti vafungezve nezvekufamba kuenda ku Aloha Nyika.
Panguva imwe, Zvitoro Zvinodhaka muHawaii mhanya kushambadza mumidhiya emuno uye pamawebhusaiti kuti vanhu vabaiwe jekiseni. Kupa majekiseni emahara ibhizimusi hombe kwavari uye zvitoro zvemishonga zvinobhadharwa. Kuti vanhu vawane majekiseni emahara, zvitoro zvakawanda zvinopa mavhoti ekutengesa ane mutengo wakaderera kuti vapinze maoko muzvitoro zvavo. MuHawaii, izvi zvinosanganisira vashanyi.
Kune akawanda majekiseni anowanikwa muUnited States. Nyika dzinovimba neindasitiri yekufambisa neyekushanya seHawaii vari kugadzira zvekugadzira kuti vataridzike zvirinani muhuwandu hwejekiseni. Zvinotaridza kuti ichi chingave chikonzero Nyika yeHawaii iri kupa pfuti kure kuvashanyi.
Nendege dzakawanda dzenyika dzisingamire kubva kuAsia kuenda kuHawaii dzakadzorerwa, Hawaiian Airlines, Japan Airlines, uye ANA vari kutora vashanyi kumahombekombe ejecha jecha e Aloha Nyika.
Kuenda kuHawaii kwemaJapan hakusi pasina kuzvipira. Zvisinei nezvenzvimbo yepasi rose kwaakabva, vese vafambi vanopinda muJapan vanoramba vari pasi pe 14-zuva rekuzvimiririra wega pakusvika uye zvinorambidzwa kushandisa zvifambiso zveruzhinji kusanganisa nendege dzekumba, matekisi, uye njanji. Chero ani anodzokera kumba achibva kuHawaii anofanirwa kugara ari oga muJapan. Nei vamwe vari maJapan vachiri kuenda kumahombekombe eHawaii?
Nhamba dzekudzivirira munyika zhinji kusanganisira East Asia dzakaderera. Pfizer neModerna ndiwo mushonga unoshanda zvakanyanya uye uri pasi pekudiwa weCVID-19. Mishonga yekudzivirira miviri iyi haisi kuwanikwa pachena mune dzimwe nyika. Vagari mune dzimwe nyika kazhinji vakagadzirira zvakanyanya kuisa mari yavo yeupenyu kuchengetedza mushonga.
Mukoti weLongs Drugs Minute Clinic muWaikiki, uyo aisada kudomwa zita akaudzwa eTurboNews:
"Tinowana vashanyi vazhinji paLongs Drugs vachitikumbira kuti tibaye jekiseni."
Varidzi vejekiseni rako vanobva kupi?
“Kunyanya maJapan, asiwo maKorea, uye kunyange vashanyi vekuEurope vanokumbira kubaiwa jekiseni. Tine vashandi vanotaura chiJapan kuti vabatsire. "Tinowana zvakare vashanyi vekumba vanokumbira kubayiwa jekiseni."
Unobvumidzwa here kupa mushonga kune chero munhu ari kuubvunza?
“Hongu, hatisarure. Tinokumbira dzinza rakanangana nenhamba chete, asi hatikumbire kuva mugari, chinzvimbo chekugara, nezvimwe. ”
Yakawanda zvakadii iyo madhiragi madhiragi anobhadharisa kuti mushonga unopa kune vashanyi vekunze kana vekunze-ve-nyika vashanyi?
“Hatibhadharise. "Tinowedzera kushambadza pakutenga kana kukurudzira kune chero munhu ari kubaiwa jekiseni."
Ndiani ari kubhadhara mushonga?
"Nyika yeHawaii iri kutibhadharira mushonga."
Ndeupi mushonga wekudzivirira wauri kupa kune vashanyi?
"Tinopa jekiseni rekubatsira rinowanikwa pasi rose: Mushonga weCCVID Pfizer kana Moderna."
Hurumende yaizoziva sei kuti vangani vasiri vagari vari kuwana mushonga?
“Hurumende haisi kubvunza kuti vatengi vedu vari kubva kupi. Isu tinorekodha nhamba yeID, sepasipoti, rezinesi rekutyaira. Neizvi, tinobhadhara Hurumende. ”
Izvi hazvingasvibise here nhamba yekubaiwa iyo State yeHawaii iri kuendesa kuCDC?
“Ndinofungidzira kuti Hurumende yaisazoziva kuti ndivanaani pane vakabaiwa majekiseni vagari uye ndivanani vashanyi. Zvese isu zvatinokumbira murwere kuwana kechipiri kupfura 3-4 mavhiki gare gare. "
Kubva pane izvi, 71% yekutanga yekudzivirira hutachiona muHawaii, uye yakakwira kupfuura 51% yakazara jekiseni rakazara muHurumende ingangove isiriyo.
Pakati penyika yega, vanopfuura chiuru chevashanyi vanosvika muHawaii pane dzisiri-dzinomira nendege mazuva ese. Vazhinji vashanyi vekunze vanosvika pakubatanidza nendege kuburikidza neUS mainland.
Mumba, Hawaii yaive nevanopfuura vanosvika makumi maviri ezuva nezuva vanosvika zuva rega rega kubva pakange pawanikwa mushonga pachena pasina kusangana.
Izvi zvinovhura mibvunzo yakawanda.
Mukuve nenhamba dzekudzivirira dzisina kunaka dzakaburitswa, vanhu vemuHawaii vari panjodzi huru kupfuura zvavanotarisira kuve?
Izvi zvaizotsanangura here kuti nei hutachiona hweHawaii uye huwandu hwerufu huri kunyora zvinyorwa zvitsva zuva rega rega?
Sei vateresi veHawaii vaizopa mushonga? Vashanyi havana pekugara kana varombo. Kana nzvimbo yekutandarira kana yendege ichida kubatsira kuibhadharira - zvakanaka. Iine rekodhi nhamba yevasina pekugara uye vanhu vazhinji vanogara kumucheto muHawaii, Hurumende inoda mari kuti ichengete dzakadai hombe nyaya dzevanhu.
Nyika zhinji mupasi rose dzave nerekhodi COVID kubuda uye kufa. Varikuda mushonga wekukurumidzira. Vagari vavo havagone kuzororo yeHawaii.
Panzvimbo pekupa jekiseni kune vashanyi vakapfuma, nei Hawaii yaisazounza mari kubva mujekiseni uye yoitumira kune nyika dzinoda?
Hapana chakakanganisika nehutachiona hwekushanya. San Marino, Israel, nedzimwe nyika dzinoverengeka vane indasitiri iri kuwedzera yekudzivirira. Nyaya iri kukanganisa manhamba uye kuisa vagari munjodzi nekupa zvisirizvo chokwadi, izvo zvisina kungokanganisa chete, asi pamwe mhosva.
Izvo zviri kuitwa neHawaii muhuwandu hukuru uye nedhivhosi - izvi zviitiko zvinokurudzirwa zviri pamutemo nekushambadzwa muGuam ne Guam Tourism Board.